स्वास्थ्य « Light Nepal
यी उपाय अपनाउनु चिसोका कारण लाग्ने रोगबाट बच्न
काठमाडौं, फागुन ७ । चिसो मौसममा बिभिन्न किसीमका रोक, समस्याहरुले सताउने गर्छ । अस्पतालहरुमा चिसोका कारण दम, रुघाखोकी, निमोनियाका बिरामी बढेका छन् । अत्याधिक जाडोले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी तथा
९० वर्षकी आमाको यस्तो पिडा, भन्छिन वुढेसकालमा धेरै दुख पाइयो ‘भिडियो’
मोरङ- मोरङको लेटाङकी ९० बर्षे बृद्ध आमा धनमाया लिम्बूको जीवन दुःखदायी छ । अम्लिसो काट्ने क्रममा पातले आँखाको छेउमा काट्यो । त्यसपछि विरानगरमा उपचार गरियो । केही समय निको भयो,
ग्याष्ट्रिक भएकाले हेर्नै पर्ने भिडियो, ग्याष्ट्रिकहुदा के खाने, के नखाने ?
समायोजन विरुद्ध सरकारी चिकित्सक, सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी
काठमाडौं, फागुन ५ । सरकारी चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । कर्मचारी समायोजनको विरोध गर्दै उनीहरूले राजीनामा दिने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान) ले आज पत्रकार
यसरी राख्नुस खुट्टालाई सधै सफा र सुरक्षीत
काठमाडौं, फागुन ४ । जाडो मौसममा हातगोडा फुट्ने, फुस्रोहुने समस्या धेरै देखिन्छ । जाडोको समयमा हामीले अनुहार र हातको सौन्दर्यमा ध्यान दिएपनी खुट्टाको सौन्दर्यमा ध्यान त्यती दिदैँनौ तर यो एकदम
रविनाको छोराको उपचार गर्न किन मान्दैनन् नेपालका डाक्टर ? उपचारका लागि उठ्न थाल्यो सहयोग रकम (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । रविना बादीको छोराको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिए पछि उपचारमा सहयोग गर्न उनले सबैसंग आग्रह गरेकी छन् । छोराको अवस्थाको विग्रिएपछि एक्लै बस्दै आएकी रविना आत्तिइन् । उनले सामाजिक सञ्जाल
धवलागिरि अञ्चलअस्पताल बागलुङले चिकित्सक आवास भवन निर्माण
गलकोट, २ फागुन।धवलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङले सेवारत चिकित्सकहरुका लागि चकित्सक आवास भवन निर्माण गरेको छ ।रु एक करोड ४६ लाख २९ हजारको लागतमा निर्माण भएको दुईतले पक्की भवनमा चार परिवार
के तपाई जवान देखिरहन चाहनुहुन्छ ? त्यसोभए यो औषधि दुधमा मिलाएर खानुहोस्
काठमाडौं, फागुन २ । शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा पूरा गर्नको लागि दुध पिउनु अत्यावश्यक छ । शरीरमा क्याल्सियमको कमि हुन नदिन हरेकलाई जन्मेदेखि नै दुध सेवन गराइन्छ । दूधले शरीरमा क्याल्सियमको
भुलेर पनि आँखा नमाडौँ, यस्तो खतरा हुन सक्छ
काठमाडौं, फागुन १ । आँखामा अचानक बाहिरी वस्तु, धातु, सिसाको टुक्रा प्रवेश गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आँखा माड्नुहुँदैन । ऐनामा आफैँ हेर्ने वा कुनै सहयोगीलाई आँखामा हेर्न लगाउनुपर्छ ।
रविनाको छोराको अवस्था बिग्रदो : जीवन बचाइदिन अपिल गर्दै भनिन् ‘कसैले मेरो छोरा जिम्मा लिइदिए अर्को किड्नी पनि बेच्न तयार छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । घरेलु हिंसाका कारण पीडित रविना बादीको एउटै सहारा हो उनको एक वर्षका छोरा । उनले केही दिन अघि मात्र छोराको एक वर्षको जन्मदिन मनाएकी थिइन् । तर त्यो